Isikhokelo sokuthenga se-2021 kwiBhafu yegumbi lokuhlambela
Ikhaya / Isikhokelo se-Faucet / Ungayikhetha njani itompu yangasese: 2021 Isikhokelo sokuthenga
Ungayikhetha njani itompu yangasese: 2021 Isikhokelo sokuthenga
2021 / 01 / 28 uhleloIsikhokelo se-Faucet 4479 0
Ukukhetha itampu yokuhlambela kwisinki yakho kungavakala njengesigqibo esilula de ube uqala ukubona ukuba zingaphi iindlela ezikhoyo. Kukho ubumbeko obahlukeneyo, imibala kunye nokugqitywa, ukuphatha isitayile, ubungakanani, nokunye okuninzi. Wazi njani ukuba yeyiphi inaliti kwifula efanelekileyo elungele indlu yakho yokuhlambela?
Kuyanceda ukuqala ngokuqonda ukhetho lwakho ngalunye kunye nokulunga, ububi kunye nokusikelwa umda. Ezinye zisenokungabi lukhetho kwigumbi lakho lokuhlambela konke konke. Makhe sihlule umohluko ophezulu phakathi kweentlobo ezahlukeneyo zeefompo zangasese ukumisela ukuba zeziphi ezizezona zilungele iimfuno zakho.
Ukuqonda uKhetho lwakho lokuFakela
Uninzi lwezinto ezingenamsebenzi kunye neendawo zokuphamba zokuhlambela ziza kunye nemingxunya yangaphambi kokugrumba iipompo. Unokuqaphela ukuba ezinye izinto ezingento zinomngxunya omnye ngasemva kwesinki ngelixa ezinye zinemithathu. Abo banemingxunya emithathu banendawo engafaniyo phakathi kwemingxunya.
Jonga amampunge akho okanye i-countertop ukuze ubone ukuba yeyiphi imingxunya onayo, kuba oku kuya kunciphisa ukhetho lwakho lweefompo. Umzekelo, ukuba unomngxunya omnye kuphela, ngekhe ukwazi ukusebenzisa ufakelo lwemibhobho emithathu yokuloba ngaphandle kokuba wenze ulwenziwo olongezelelekileyo.
Ukongeza kwinani lemingxunya, jonga indlela ebekwe ngayo imingxunya. Ukuba unemingxunya emithathu, linganisa umgama phakathi kwezona mingxuma zimbini zikude macala omabini. Iimpompo ezahlukileyo zenzelwe uyilo lwemingxunya eyahlukeneyo.
Ngale milinganiselo kunye nokusikelwa umda engqondweni, ungahambela phambili ngokwazi ukuba loluphi ufakelo kwaye ayilulo ukhetho kuwe njengoko sijonga ezo ntlobo zofakelo.
Iindidi Zokufakelwa Kwethebhu
Phakathi kwompompo kunye neziphatho, zininzi iindlela ezahlukeneyo zokubekwa kwetephu. Ezi ziindidi eziqhelekileyo ozifumanayo.
Iifayile ze-Chrome zeBlue Bath Faucet Centerset
Umbhobho wombhobho weziko unompompo kunye neziphatho ezibini, kodwa zonke zibekwe kwisiseko esinye. Oku kuqheleke ngokukodwa kumampunge amancinci kuba adibene. Ipompo yeziko iya kufuna ufakelo olunemingxunya emithathu, kwaye uninzi lwazo luza ngobukhulu obahlukeneyo, ke kuya kufuneka ukhethe olingana nomgama phakathi kwemingxunya yakho yamampunge.
Ii-Faucet ezi-Hole zodwa
I-Chrome single-Hole Faucets Faucets Faucets
Ngokwenyani kwigama layo, itepu yomngxunya omnye ibandakanya isiqwenga esinye: itepu. Uninzi lwezi luya kuba nesiphatho esakhelwe kumbhobho, ngesiqhelo ngaphezulu kwespout.
Uninzi lweepompo ezinemingxunya eminye zimfutshane, kodwa kukwakho neefompu zeenqanawa, eziyilelwe izitya zokuntywila ngenqanawa ukuze zide kuneempompo zesiko. Nokuba kunjalo, ukuba unofakelo olunemingxunya enye, ezi ziindidi zeefompo oya kuzifuna.
I-nickel ebrashiweyo i-Faucets ezisasazekayo kwigumbi lokuhlambela
Umbhobho osasazeke ngokubanzi unamacandelo amathathu ahlukeneyo: itepu kunye nezibambo ezibini. Ngokungafaniyo neepompo zeziko, iimpompo ezixhaphakileyo azinaso isiseko; La malungu mathathu afakelwe ngokwahlukeneyo ngento engento engenanto okanye isithuba semiphezulu yeetafile phakathi kwawo.
Ezi mpompo zinokukhetha kuphela ukuba unendawo emiselweyo yemingxuma emithathu kwilize lakho. Ngethamsanqa, nangona kunjalo, kuba ezi ziqwenga zintathu zahlukile, akukho sidingo sokukhetha itompu ehambelana nobubanzi obuchanekileyo bokuyilwa kwakho: ingqwalaselo ebalulekileyo kwiziko leepompo.
Iibhanti eziKhweliswe eludongeni
I-Wall Mount Igumbi lokuhlambela i-Chrome
Iimpompo ezifakwe eludongeni yinto ekhulayo, ngakumbi kumagumbi okuhlambela anqabileyo. Ngokwenyani kwigama labo, ezi mpompo zixhonywe eludongeni okanye kwi-backsplash emva kwesinki yakho kunokuba kungamampunge ngokwawo. Oku kukhulula indawo engaphezulu kwi-countertop, nangona ihlala yongeza kwixabiso lokuhlambela kwakho kuba ihlala ifuna iplamba ukuhambisa eminye imibhobho ukufikelela kwindawo yofakelo.
Izinto ezichaphazela uhlobo lwakho lokuFakelwa kweBhobho
Wazi njani ukuba zeziphi kwezi ntlobo zokufaka ufakethi onokukhetha kuzo? Cinga ngezi zinto.
Imingxunya yokuFakelwa kwangoku
Buyela emva kwimingxunya esekwe kwangaphambili kwilize yakho okanye kwikhawuntara yakho. Ukuhlaziya ixabiso elingenaxabiso lokuhlambela kwigumbi lokuhlambela, khetha itompu eyenzelwe uhlobo loqwalaselo lwecomputer yakho.
Unokhetho lokugrumba imingxunya eyongezelelweyo, kodwa oku kunokuba kubiza. Gcina ukhumbule ukuba unokukhetha itompu enye ukuba unemingxunya emithathu kwilize lakho, kodwa jonga itompu enendlela yokufihla imingxunya engasetyenziswanga.
Ufuna itepu yakho ibe ngokulingana nobungakanani bamampunge akho okanye kwikhawuntara yakho. Ngokubanzi, amampunge amancinanana asebenza ngcono ngomngxunya omnye, iseti yeziko, okanye iipompo ezibekwe eludongeni. Iimpompo ezisasazeke ngokulinganayo ziyafana ngakumbi kumampunge amakhulu nakwiitafile.
Uninzi lweepompo luyilelwe isiko, kwiindawo zokuntywila zokuntywila. Nangona kunjalo, iinqanawa zokuntywila ziya zithandwa ngakumbi. Ukuba unayo okanye ucwangcise ukuba nesinki yomkhumbi, khetha itepu yomkhumbi okanye itampu efakwe eludongeni ephezulu ngokwaneleyo ukulungiselela isinki yakho.
Ukuphatha i-Faucet kunye noKhetho loLawulo lwaManzi
Omnye umahluko oza kuwubona phakathi kweefompo yindlela abaphatha ngayo ulawulo lwamanzi, njengenani leziphatho abazisebenzisayo kunye nendlela ezihamba ngayo. Ezi zezona ndidi zinokwenzeka ukuba uya kuzifumana.
Iimpompo ezihamba ngaMnye
Ukuphathwa okungafaniyo kwebhokisi yokuhlambela i-nickel
Iimpompo ezinesiphatho esinye zinesiphatho esinye esilawula ukuhamba kwamanzi kunye nobushushu bamanzi. Isibambo sijikela ngasekhohlo nasekunene ukulawula iqondo lobushushu ngelixa sinyuka sinyusa ukulawula ukuhamba kwamanzi.
Ezi ntlobo zeziphatho zixhaphakile kwiimpompo ezinemingxunya enye kunye neepompo zeenqanawa kunye neepompo ezibekwe eludongeni. Abantu abaninzi bakufumana kulula ukulawula kunokuba neziphatho ezahlukileyo zamanzi ashushu nabandayo kuba kunokuba nzima ukufumana ibhalansi elungileyo phakathi kwezi zimbini.
Iibhobho zokuphatha ezibini
Ii-Faucet ezi-Handle ezimbini i-oyile eyiRubheyisi yoBhedu esasazeke kakhulu kwi-Bathin Sink Faucet
Kwiziko leziko kunye neempompo ezixhaphakileyo, lindela ukuba iipompo zakho zibanezibambo ezimbini ezahlukeneyo. Omnye ulawula ukuhamba kwamanzi abandayo ngelixa elinye lilawula ukuhamba kwamanzi ashushu. Ngokungafaniyo nompompo ophatha isibambo esinye, ezi ziphatha zijika ngendlela enye: nokuba ngasekhohlo nangasekunene okanye phezulu nangaphezulu.
Ukucofa ii-Faucets ezisebenzayo
Impompo eyenziwe yasebenza kukunkcenkceshela umphezulu wompompo. Ngamanye amagama, awudingi ukuguqula isiphatho esithile. Impompo nje yesandla sakho, ingalo, okanye ingqiniba iyakwenza ukuba ipompo isebenze.
Ezi mpompo ziluncedo ngokukodwa kwiinjongo zococeko. Ukuba izandla zakho zimdaka, umzekelo, unokuvula itompo ngengqiniba endaweni yokubamba izibambo ngezandla ezimdaka.
Ukulawulwa kobushushu kuyahluka kwezi ntlobo zeefompo. Abanye banobushushu obumiselwe kwangaphambili, ke amanzi ahlala ephuma kubushushu obufanayo. Abanye banesiphatho esinye okanye ezibini onokuthi uzisebenzise ukulawula ubushushu, ke unokuvula amanzi kwaye unike izandla zakho kuqala ngaphambi kokuba uhlengahlengise iqondo lobushushu.
Ngokwenyani kwigama labo, iipompo ezingachukumisiyo azifuni kunxibelelana kwaphela. Zinezivamvo ezifumanisa xa izandla zakho zisondela etephini, kwaye ezo zivamvo zivula itepu. Njengazo zonke iimpompo ezenziwayo zokuchukumisa, iipompo ezingachukumisiyo zihlala zinobushushu obusethwe kwangaphambili.
Izinto ezichaphazela ukuPhathwa kwakho kunye noLawulo lwaManzi
Ngaba ukhetha esona sibambo silawulayo kunye nendlela yolawulo lwamanzi kwindawo yakho yangasese? Zininzi izinto ekufuneka zichaphazele isigqibo sakho.
Izakhono zokuHamba ngesandla
Ngaba ukhona umntu ekhayeni lakho okanye nabani na otyelele ikhaya lakho onobunzima bokuhamba kwesandla sakhe? Banokuba nesifo samathambo, ukonakala kwentliziyo, okanye olunye uhlobo lokugula okanye lokwenzakala. Ukuba kunjalo, itepu engachukunyiswayo okanye eyenzelwe ukuba icofwe ngaphandle ifuna amandla esandla kunye nolungelelwaniso ukuze kube lula kubo ukuphatha.
Ezona zinto ziphambili ngokubaluleka kwezococeko
Phakathi kwemikhuhlane, umkhuhlane, kunye nobhubhane we-COVID-19, zininzi izizathu zokujonga iindlela zokwenza ikhaya lakho lingabinantsholongwane. Oku kuyinyani ngokukodwa ukuba unabantwana, njengoko izandla zabo ezincinci zihlala zifumana indlela yazo yokungcola kunye nezinye izinto ezihlaselayo. Ukhuseleko kunye nempilo, iimpompo ezingachukumiseki okanye ezisebenzayo ngaphandle kwebala iya kuba yeyona nto ubheja ngayo.
Uhlobo loFakelo lweBhobho
Buyela emva koqwalaselo lwakho lokumisa itepu kwilize lakho. Inani lemingxunya onayo inokunciphisa umda kukhetho lwakho kwiindidi zeziphatho ozikhethayo. Ukuba unolungelelwaniso lomngxunya omnye, ngekhe ubenakho ukukhetha itompu yokubamba emibini ngaphandle kokuba wenze ulwenziwo olongezelelekileyo.
Izitayile zokuphatha ibhobho
Xa ukhetha itampu yakho, kubalulekile ukuba ujonge indlela ophethe ngayo, hayi inani leziphatho. Qwalasela ezi ndlela ziphambili.
Izibambo ezinamaqhina ngokubanzi ziziphatho ezijikelezileyo ojika zilawule ukuhamba kwamanzi kunye neqondo lobushushu. Abanye abantu bayazikhetha kuba zihlala zihambelana ngakumbi kunezibambo. Ngokuyintloko uya kubona amaqhina kulungelelwaniso lwemibhobho emibini yokuphatha, nangona kukho iipompo zokubamba ezizodwa ezinamaqhina ahamba macala onke.
Isiphatho sesitshixo lolona hlobo luqhelekileyo lwesiphatho oza kulibona kwiimpompo. Yenziwe njengentonga ethe tyaba, nangona isiphatho ngasinye sinendlela yaso kunye nokugoba. Njengamaqhina, ezi zinto ziphathwayo zibonakala kwiipompo ezibamba ezimbini kwaye ujike ngasekhohlo nasekunene kuphela.
Xa unesiphatho sokuphatha isibambo esinye, isiphatho eso sisiphatho sokuzonwabisa. Ezi ziziphatho ezinde ezinyukayo zenyuka ezantsi kwaye zisekhohlo nasekunene ukuze zikwazi ukulawula ubushushu kunye nokuhamba kwamanzi. Ziqhotyoshelwe ngokuthe gca kwimpompo yesanti.
Izinto ezichaphazela uKhetho lwakho lweNdlela
Njengoko uqwalasela indlela ophatha ngayo itephu yakho yangasese, gcina ezi zinto engqondweni.
Njengakwindlela yokubamba eyahlukeneyo, iindidi zeziphatho ozikhethayo zinokuxhomekeka ekuhambeni kwesandla samalungu osapho lwakho. Iikhonkco, umzekelo, zifuna ukubambelela ukuze kube nzima ukuzisebenzisa kubantu abanamandla amancinci esandla okanye ulawulo lwezandla. Izitayile zokuvuya kunye namanqwanqwa zifikeleleka lula.
Uhlobo lokumiselwa kwetipu olukhethileyo luya kunciphisa ukhetho lwakho lokuphatha. Umzekelo, ukuba ufuna itephu yokubamba enye, ezi ziya kuhlala zinesiphatho sokuzonwabisa.
Gqibezela iinketho zeeBhafu yeeBhafu
Njengokucwangciswa kunye nokusebenziseka kwemibhobho yamanzi yangasese, ufuna kwakhona ukuba itompu ijongeke kakhulu kwigumbi lakho lokuhlambela. Kulapho imibala eyahlukeneyo kunye nokugqitywa kungena khona, ke gcina ezi zinto zikhethiweyo engqondweni.
Iziko lokuhlambela iZiko lokuGcina iManzi Chrome
I-Chrome iphakathi kwezona zigqityiweyo ziyaziwayo kwiifompo zangasese nangaphezulu. Umbala wayo ofana nesilivere kunye ne-gloss ephezulu yenza ukhetho oluthandwayo.
ICenterset Igumbi lokuhlambela elineNdibano yePop-Up yokukhupha amanzi
Iimpompo zeNickel zinokuba nombala wesilivere okanye phantse umbala weetan, kunye nezandi zangaphantsi ezityheli. Zombini i-nickel ebrashiweyo, ene-satin sheen, kunye ne-nickel ekhazimlisiweyo, eyi-glossier, zixhaphakile kwigumbi lokuhlambela langoku nakwimveli
Ibronze yeRubber yeoyile
Kwigumbi lokuhlambela Sink Faucet 4 Inch Centre Ioyile eyiRubhed
Ngombala wayo omdaka obunzulu, phantse umbala omnyama, i-bronze ye-oyile ekrwada inyuke yathandwa kule minyaka idlulileyo. Kuqhelekile kumagumbi okuhlambela ngesimbo sendabuko okanye sangoku, kwaye ihlala ine-satin ethambileyo.
I-Brass iye yangena yaza yathandwa amatyeli aliqela, kodwa namhlanje, lukhetho olukhulayo kwiipompo zangasese. Ngokufana ne-nickel, uya kufumana zombini ubhedu obheduweyo kunye neepompo zobhedu ezipholileyo.
Isitya seFinki sompompo Matte Mnyama
Matte mnyama lukhetho olutsha lweefompo kwaye iya ithandwa kakhulu, ngakumbi kumakhaya anamhlanje. Isitayile esingakhanyisiyo sinesibindi kwaye siphila ngoku ngelixa umbala omnyama kulula ukuwudibanisa phantse nawo nawuphi na umbala wombala.
Isinki Isinki Faucet Yenziwe ngentsimbi eshayinayo
Njengoko ithandwa njengensimbi engenasici ekhitshini, ngoku yinto eqhelekileyo kwiipompo zangasese. Ihlala ikhangeleka ifana ne-nickel ebrashiweyo kodwa ngaphezulu kwesandi esiphantsi esiluhlaza, kunye nokugqitywa kancinci.
Izinto ezichaphazela uKhetho lwakho phakathi kokuGqitywa kweBhobho
Zeziphi kwezi ndlela zokugqiba lukhetho olufanelekileyo kumbhobho wakho wokuhlambela? Cinga ngezi zinto.
Ngokucacileyo, ufuna ukuba igumbi lokuhlambela lakho linobumbano olunamathelayo, oluhle. Ukugqitywa kombhobho ogqityiweyo kuya kuncedisa iindlela ezahlukeneyo kunye nemibala, ke ukhethe eyona ilungele isitayile sakho.
Ezinye izinto ezigqityiweyo kulula ukuzigcina kunabanye, kwaye nganye inezinto ezilungileyo nezingalunganga. Ukugqitywa kweGlossier kubonisa amabala kunye neminwe ngokulula kunokuba kugqitywe i-matte kunye ne-satin, kodwa kulula kakhulu ukuzicoca. Beka izinto eziphambili ngokubaluleka ngelixa ukhetha ukugqiba itephu yakho.
Ukufezekisa isitayile esimanyeneyo kwindawo yonke yokuhlambela, abantu abaninzi bafuna ukutshatisa iifompu zabo kunye nezinye izinto ezisegumbini, njengesipili sabo, izixhobo zokubala kunye nezinye iziqwenga. Eyona nto ithandwa kakhulu kukugqibezela kwetephu yakho, koku kuya kuba lula ngakumbi.
Ukukhetha ifenitshala yakho yegumbi lokuhlambela
Ngokucacileyo, kuninzi okuya ekukhetheni itompu yakho elandelayo yangasese. Kungumcimbi wokuqonda iimodeli ezahlukeneyo kunye nezinto onokukhetha kuzo, ukumisela ukuba zeziphi ezikhoyo ngokusekwe kwigumbi lakho lokuhlambela nakwinto engento yakho, kunye nokufumana ulungelelwaniso olululo kuzo zonke iimfuno zakho kunye neenjongo. Ukufumana uncedo oluthe xaxa kunye neengcamango eziphezulu ze-faucet, khangela ezinye izikhokelo zokuthenga i-faucet.
Iingcebiso zoluhlu lwemibhobho yokuhlambela
Ngaphambili :: Ucoceka njani Ukulungiswa kweMatte eMnyama yokuGcina next: Ungazicoca njani iipompo zeKhitshi eMnyama eMnyama
Uphengululo lweMibhobho yeDelta yokuHlola: Isikhokelo sokuthenga se-2021 seDelta Shower Faucets
2021 / 02 / 04 12528
Uphengululo lweefaquet zasekhitshini laseDelta: Isikhokelo sokuthenga ngo-2021 seefayili zeDelta zasekhitshini
Uphengululo lweMibhobho yaManzi yegumbi lokuhlambela i-Delta: Isikhokelo sokuthenga ngo-2021 kwii-Delta zeBhafu yokuhlamba
Ungazicoca njani iipompo zeKhitshi eMnyama eMnyama
2021 / 01 / 28 7908
Ucoceka njani Ukulungiswa kweMatte eMnyama yokuGcina
2021 / 01 / 28 9951
Sesiphi esona sigqibelo sithandwa kakhulu kwiipompo zegumbi lokuhlambela?
2021 / 01 / 27 6313